April 28, 2021 - ApannPyay Media
April 28, 2021 by ApannPyay Media
ပိန်လွန်းလို့ စိတ်ညစ်နေသူတွေအတွက် ထိရောက်တဲ့ သဘာဝ ဝိတ်တက်နည်း လူတစ်ယောက်မှာ အရပ်နဲ့ ခန္ဓာကိုယ်အချိုးအစားအလိုက် ညီမျှတဲ့ ကိုယ်အလေးချိန်ရှိသင့်ပါတယ်။ တစ်ခါတလေ ဝိတ်ချရတာထက် ဝိတ်တက်ဖို့က ပိုလို့ခက်နေတဲ့ လူတွေလည်း အများကြီးရှိပါတယ်။ ဘယ်လောက်စားစား ‘ဝ’ မလာတာဟာ ဘုရားပေးတဲ့ ဆုလာဘ်ဆိုပေမဲ့ တချို့လူတွေကတော့ ပိန်တာကိုပဲ လာလာခလုတ်တိုက်တတ်ကြပါတယ်။ ပိန်တိုင်းလည်း ကျန်းမာရေး မကောင်းလို့ မဟုတ်သလို စိုပြေဝဖြိုးနေတိုင်းလည်း ကျန်းမာရေး ကောင်းနေတယ်ပြောလို့မရပါဘူး။ ဒါကြောင့် ပိန်လွန်းလို့ စိတ်ညစ်နေတဲ့ ကိုကို မမတွေအတွက် သဘာဝဝိတ်တက်နည်းတွေကို ပြောပြပါမယ်။ ၁။ ခန္ဓာကိုယ်အလေးချိန်တိုင်းတာပါ သိပ္ပံပညာရှင်တွေကတော့ အရမ်းပိန်လွန်းတယ်ဆိုတာ ကိုယ်အလေးချိန် ကွာဟချက်များနေတာကြောင့် လို့ဆိုကြပါတယ်။ ဆိုလိုချင်တာကBMI (bodymassindex) က ၁၈.၅ အောက်ရောက်နေတာကိုပြောတာပါ။ ကျန်းမာသူတစ်ယောက်ရဲ့ BMI က ၁၈.၅ နဲ့ … Read more
အဆီပြန်တဲ့အသားအရေပိုင်ရှင် ပျိုမေတို့အတွက် သဘာဝပေါင်းတင်နည်း (၈)မျိုး
အဆီပြန်တဲ့အသားအရေပိုင်ရှင် ပျိုမေတို့အတွက် သဘာဝပေါင်းတင်နည်း (၈)မျိုး အဆီပြန်တဲ့ အသားအရေပိုင်ရှင်တွေက တခြားသူတွေထက် အရေပြား မှာ အဆီထုတ်လုပ်မှု ပိုများတာကြောင့် အဆီကြိတ်၊ ဆားဝက်ခြံ၊ ဝက်ခြံနဲ့ တခြား အရေပြားပြဿနာတွေ ပိုဖြစ်နိုင်ပါတယ်။ ဒါပေမယ့် အဆီပြန်တဲ့ အသားအရေပိုင်ရှင်တွေက အရေးအကြောင်းတွေ လွယ်လွယ်နဲ့မဖြစ်တတ်ဘဲ အသက်ကြီးတဲ့အထိ အသားအရေတင်းရင်းနေနိုင်တာပါ။ အဆီပြန်တာက အရေပြားအပေါ်ယံလွှာမှာရှိတဲ့ အဆီဂလင်းတွေကနေ အဆီထုတ်လုပ်မှု များလွန်းတာကြောင့်ဖြစ်ပြီး ချွေးပေါက်ကျယယ်တွေကိုလည်းဖြစ်စေပါတယ်။ ဒီတော့ အဆီဂလင်းက အဆီထုတ်လုပ်မှုကို လျော့နည်းအောင် အဆီပြန်တာကို ပျောက်ကင်းအောင် လုပ်နိုင်မယ့် သဘာဝနည်းလမ်းလေးတွေကို ပျိုမေတို့ သိချင်ကြလိမ့်မယ်လို့ထင်ပါတယ်။ အခုပဲ ဖော်ပြပေးလိုက်ပြီမို့ ဖတ်ကြည့်ပြီး အခုပဲလုပ်လိုက်တော့နော်။ (၁) ကြက်ဥအကာ ကြက်ဥအကာမှာ ပါဝင်တဲ့ ဗီတာမင် အေက အသားအရေအတွက် အထောက်အကူအများကြီးဖြစ်ပြီး အဆီဂလင်းကနေ အဆီတွေအများကြီး မထုတ်လုပ်အောင် … Read more
ကားမှာပါတဲ့ အရေးကြီးတဲ့ Safety Lock (3) မျိုး ကျနော်တို့လက်ရှိ အသုံးပြုနေတဲ့ ကားတွေဟာ ခေတ်မီနည်းပညာသုံး ကားတွေဖြစ်ပြီး ဟိုးအရင် ခေတ်ဟောင်း ကားတွေနဲ့မတူ မော်တော်ယာဉ်အတွက်ရော ကားမောင်းသူအတွက်ပါ အန္တရာယ် ကင်းရှင်းရေး နည်းပညာတွေကို တီထွင်အသုံးပြုနေကြပါပြီ ။ ဒီနေ့တင်ပြပေးချင်တဲ့ ကားမှာပါတဲ့ Safety Lock သုံးမျိုးကတော့ ကားမောင်းသူ တယောက်တည်း အတွက်မဟုတ်ဘဲ ကားမှာလိုက်ပါစီးနင်းနိုင်တဲ့ ကားမောင်းသူရဲ့ မိသားစု၀င် (အဓိက အားဖြင့် ကလေးတွေ) တွေအတွက် အထူးပြုလုပ် ထည့်သွင်း ထားတဲ့ Safety Lock လေး ၃ မျိုးပါ ။ 1. Child Lock Child Lock ဆိုတာကတော့ ကားတံခါးကို အတွင်းကနေ ဖွင့်မရဘဲ အပြင်ကနေပဲ … Read more
ဝဲနှင်းခူ အစိုအခြောက် အကင်းမသေပဲ ခဏသာပျောက်ပြီး ပြန်ဖြစ်နေလျှင် ဝဲနှင်းခူ အစိုအခြောက် ရွာမှမိန်းမပျိုလေးတဦးသည် ခြေသလုံးတွင်ဝဲနှင်းခူပေါက်နေသဖြင့် အင်္ဂလိပ်/မြန်မာဆေးပေါင်းစုံဖြင့်ကုသရာ အကင်းမသေ။ခဏသာပျောက် ပြီးပြန်ဖြစ်တော့စိတ်ပျက်နေတာ။ ခွေး/ဆိတ်တွေဝဲစားလျှင် သပွတ်အခါးသီးနှင့်တကြိမ်တည်းပွတ် သည်နှင့်ပျောက်သောကြောင့် အခြားသူတွေကသပွတ်ခါးသီးနှင့် ကုရန်အကြံပေးကြည့်သည်။ အိုးတိုက်တာနဲ့ဆိုတော့မခံနိုင်ဘူးဟုငြင်းသည်။ အမှန်မှာတိရစ္ဆာန် ဆေးနှင့်ကုသည်ဟုအစ။အနောက်ခံရမှာစိုးလို့ပါ။ နောက်တော့ကုဖြစ်သည် ကုနည်းက ဆေးနည်း သပွတ်အခါးသီးအစိုဆို ကျေသွားအောင်ထုပါ။အခြောက်ဆိုအ ပေါ်ယံအခွန်ပါးကိုခွါ။အစေ့တွေထွက်လာမည်။ နောက်နူးလာပြီးအမျှင်တွေ ပျော့သွားသလိုအူတိုင်ပါပျော့လာမည် အနာပေါ်ဖိပွတ်။ပွတ်ပါ။အူတိုင်မှ ဆပ်ပြာမြှုပ်လိုထွက်လာမည်။၁၅မိနစ် ခန့်လုပ်ပါ။အမြှုတ်တွေအတိုင်းထားပါ ရေမဆေးရပါ။ သေချာအောင် နောက်နေ့တကြိမ်ဆက်လုပ်ပါ။ငါးရက်ခန့်ကြာ မှာစပျောက်သည်။ ဆေးကုပြီးတာ( ၇)လရှိပြီဖြစ်ကြောင်း။ပြန်မထလာကြောင်းပြောပြရာ။ မိမိက ဒီရောဂါပိုးဟာနက်ရှိုင်းစွာနေတတ်လို့ ပေါ်ယံသာသေပြီးအ တွင်းကောင်များကျန်နေနိုင်သည်ဖြစ်၍နောက် (၆)လထိကောင်းမှသေချာမှာဟုပြောခဲ့သည်။ ဆရာကြီးသာဂဒိုးပြောသောမောင်သံချောင်း၏ရောဂါပျောက်ပုံ ကိုသဘောကျသည်။သူ့မှာခြေနှစ်ဘက်စလုံး ကြီးမားကျယ်ပြန့်ပြီးထုထယ် ကြီးမားသောဝဲနှင်းခူကြီးဖြစ်နေသူ။ဆေးပေါင်းစုံနေပြီ။မပျောက်။ တနေ့ရွှေတဂုံဘုရား ရေဆိုးမြောင်းလုပ်အားပေးရာသို့ရောက် သွားပြီးကြည့်ရှုနေစဉ်မြောင်းထဲချော်ကျတော့အနာကတစစ် စစ်နှင့်ခံလို့ကောင်း။ သုံးပေကျော်နက်သောမြောင်းထဲမှ ာတနာရီကျော် လုပ်အားပေးလိုက်သည်။ ငါးရက်ကြာသောအခါ အနာဖေးလိုကွာလာပြီးလုံးဝကောင်းသွား … Read more
ဘုရားရှိခိုးရသောအကျိုးရှစ်ပါး ၁။ သွားလေရာရာ ရောက်လေရာ အရပ် ၁၀ မျက်နှာတို ့၌ အပူဇော် အချီးမြှောက်ကို ခံရခြင်း ။ ၂။ သွက်သွက်လက်လက်နှင့် ထက်မြတ်သော ဉာဏ်ပညာကို ရရှိ ခြင်း ။ ၃။ ကိုယ့်အလိုလိုက်ပြီး ကိုယ့်အကြိုက်ကိုသာ လုပ်ကိုင်ပေးကြသော အခြွေအရံ ပရိသတ်နှင့် ပြည့်စုံရ ခြင်း။ ၄။ မရေမတွက်နိုင်သော စည်းစိမ်ချမ်းသာနှင့် ပြည့်စုံ ခြင်း။ ၅။ ဘဝတိုင်း ဘဝတိုင်း အဆင်းရုပ်ရည် လှပ ခြင်း။ ၆။ ကိုယ်လှ စိတ်လှ အတွင်းအပြင် လှပသည့်အတွက် အများ၏ နှစ်သက်ခြင်းကို ခံယူရခြင်း ။ ၇။ မိတ်ဆွေ အပေါင်းအသင်းတို ့၏ ချစ်ခင် ရိုသေလေးစားမှု ခိုင်မြဲ ခြင်း။ … Read more
အစားအစာတွေ အများကြီးစားသောက်ပြီးလို့အီလည်လည်ဖြစ်နေရင် သက်သာစေမယ့် နည်းလမ်း များ ပျော်ပွဲရွှင်ပွဲတွေမှာ ကျွန်တော်တို့ အားရပါးရစားသောက်လေ့ရှိကြတဲ့အတွက် စားသောက်ပြီးတဲ့ ပြည့်အင့်တဲ့ဒဏ်ကိုခံစားရပါတယ် ။ခန္ဓာကိုယ် ထဲကို အချိုတွေနဲ့ အငံဓါတ်တွေအများကြီးရောက်လာတဲ့အခါမှာ လူကနေမထိ ထိုင်မသာဖြစ်တတ်ပါတယ် ။ဒါပေမယ့် အခုလိုဖြစ်နေတဲ့ ပြဿနာကို ဖျော်ရည် ၃ မျိုးနဲ့ ဖြေရှင်းနိုင်တယ်ဆိုတာရော သင်သိရဲ့လား ။ ၁- သံပုရာရည် သိပ်ကိုအစွမ်းထက်တဲ့ နည်းလမ်းဟောင်းတစ်ခုပါ ။သံပရာရည်ဟာ အစာချေစနစ်ကို တိုးတက်စေတဇဲ့အပြင် ခန္ဓာကိုယ်ရဲ့ဇီဝဖြစ်စဉ်တွေကိုလည်း လှုံ့ဆော်ပေးပါတယ်။ဗီတာမင်စီ ပါဝင်တဲ့အတွက် ခန္ဓာကိုယ်ကိုလန်းဆန်းစေပြီး အသည်းထဲက အဆိပ်အတောက်တွေကိုလည်းဖယ်ရှားပေးနိုင်ပါတယ်။ဒါကြောင့် မနက်စောစောစီးစီး ဘာအစားအသောက်မှမစားခင် သံပရာသီးတစ်ခြမ်းလောက်ကို ရေနွေးနဲ့သောက်ပေးမယ်ဆိုရင် သင့်ရဲ့ကျန်းမာရေးအခြေအနေ အလွန်တိုးတက်လာနိုင်ပါတယ် ။ ၂- သစ်သီးဖျော်ရည် လိမ္မော်သီး ၊ စပျစ်သီး အစရှိတဲ့ အသီးဖျော်ရည်တွေ ၊ ဂေါ်ဖီထုတ် ၊ … Read more
ရက်အနည်းငယ် အတွင်းမှာ မျက်နှာကို ဖြူဖွေးအောင် လုပ်နိုင်တဲ့ နည်းလမ်းကောင်း တကယ်လွယ်ပြီးတော့ တကယ်လည်း ကောင်းပါ တယ်။ အသုံးပြုပြီးချိန်မှာ မျက်နှာတွင်သိသိသာ သာ ဖြူဝင်းသွားစေ မှာ ဖြစ်ပါတယ်။ ငွေကြေးအ ကုန်အကျ သက်သာပြီး အသုံးပြုရ တာလည်း လွယ်ကူပါတယ်။ အသုံးပြုပုံကတော့ (၁) သန့်စင်သော ခွက်တစ်ခုကို ယူလိုက်ပါ။ (၂) ထိုခွက်ထဲသို့ ပျားရည် လက်ဖက်စားဇွန်း ၂ ဇွန်းထည့်လိုက်ပါ။ (၃) သကြားလက်ဖက်စားဇွန်း တစ်ဇွန်းကိုလည်း ထည့်လိုက်ပါ။ (၃) သံပုရာရည် အနည်းငယ် ညစ်ထည့်ပြီး မွှေလိုက်ပါ။ သာကူကြို ပုံစံမျိုးဖြစ်သွား တာကို တွေ့ရပါလိမ့်မယ်။ ထို့နောက် လက်ပေါ်ကို အရင်ဦးဆုံး သုတ်လိမ်းကာ စမ်းသပ်နိုင် ပါတယ်။ တကယ် အသားဖြူပြီး ထိရောက် … Read more
ဝက်ခြံနဲ့အဆီကြိတ်ကင်းစင်တဲ့ မျက်နှာလေးကို ပိုင်ဆိုင်လိုသူတိုင်း လိုက်နာရမယ့် အချက် (၇) ချက်
ဝက်ခြံနဲ့အဆီကြိတ်ကင်းစင်တဲ့ မျက်နှာလေးကို ပိုင်ဆိုင်လိုသူတိုင်း လိုက်နာရမယ့် အချက် (၇) ချက် မျက်နှာအသားအရေဟာ ပင်ကိုယ်ကောင်းနေမှ မိတ်ကပ်လိမ်းရင်လည်း လှမှာပါ။ ဒီလိုမှမဟုတ်ပဲ မျက်နှာအသားအရေဟာ အဆီကြိတ်တွေ၊ ဝက်ခြံတွေရှိနေရင် ဘယ်လောက်ပြင်ပြင် အဆင်ပြေနိုင်မှာ မဟုတ်ပါဘူး။ ခုဖော်ပြပေးမှာကတော့ ဝက်ခြံနဲ့ အဆီကြိတ်ကင်းစင်တဲ့မျက်နှာလေးကိုပိုင်ဆိုင်နိုင်စေမယ့်အသားအရေ ထိန်းသိမ်းနည်းပုံစံတွေပဲဖြစ်ပါတယ်။ (၁) မျက်နှာပေါ်ကအဖုတွေ၊ ဝက်ခြံတွေနဲ့ အဆီကြိတ်တွေကို ထိုးတာ၊ ဆိတ်တာ၊ ညှစ်တာမျိုး လုံးဝမလုပ်ပါနဲ့။ လက်ယောင်လိုက်တာတွေ၊ ပိုးဝင်တာတွေဖြစ်ရင် ပိုပြီးဆိုးလာမှာပါ။ (၂) အိပ်ရာမဝင်ခင်တိုင်း သေသေချာချာ မျက်နှာကို ဆေးကြောသန့်စင်ပါ။ မိတ်ကပ်လိမ်းထားရင်လည်း ပြောင်စင်အောင်ဖျက်ပြီး မျက်နှာသစ်ပေးပါ။ (၃) မိတ်ကပ်မလိမ်းပါနဲ့။ မိတ်ကပ်ဟာ မျက်နှာပေါ်ကချွေးပေါက်တွေကို ပိတ်စေနိုင်တဲ့အတွက် မျက်နှာပေါ်ကဝက်ခြံတွေကို ပိုပြီးဆိုးရွားလာစေပါတယ်။ (၄) ရေများများသောက်ပါ။ ရေဟာခန္ဓာကိုယ်ထဲက အညစ်အကြေးနဲ့ အဆိပ်အတောက်တွေကိုဖယ်ရှားပေးနိုင်တဲ့အတွက် ခန္ဓာကိုယ်အတွင်းပိုင်းကို သန့်စင်ပေးပါတယ်။ … Read more
မိမိရဲ့ မျက်နှာအချိုးအစားအလိုက် လိုက်ဖက်တဲ့ ရှေ့ဆံပင်ပုံစံ ရွေးချယ်နည်း
မိမိရဲ့ မျက်နှာအချိုးအစားအလိုက် လိုက်ဖက်တဲ့ ရှေ့ဆံပင်ပုံစံ ရွေးချယ်နည်း ဆံပင်ဟာ လူတစ်ယောက်ရဲ့ ဒုတိယမျက်နှာလို့ ပြောလို့ရပါတယ်။ ဘယ်ေ လာက်ပဲ လှပတဲ့ မျက်နှာကို ပိုင်ဆိုင်ထားပါစေ၊ မိတ်ကပ်ကို လှအောင် လိမ်း ထားပါစေ လိုက်ဖက်တဲ့ ဆံပင်ပုံစံက ကိုယ်နဲ့မလိုက်ရင် ဘယ်လိုမှ လှပနိုင်မှာ မဟုတ်ပါဘူး။လူတစ်ယောက်ချင်းစီမှာ သူတို့နဲ့လိုက်ဖက်တဲ့ ဆံပင်ပုံစံဆိုတာ ရှိပါတယ်။ တစ်ယောက်နဲ့တစ်ယောက်ရဲ့ မျက်နှာကျပေါ် မူတည်ပြီး လိုက်ဖက်တဲ့ ဆံပင် ပုံစံချင်းတူနိုင်မှာ မဟုတ်ပါဘူး။ ဒီတစ်ခါမှာ ပြောပြပေးချင်တာကတော့ လိုက်ဖက်တဲ့ ရှေ့ဆံပင်ပုံစံရွေးနည်းပါ။ ကိုယ့်ရဲ့ မျက်နှာက ဘယ်လို ပုံစံမျိုး လဲ.? ဘေးခွဲ၊ခလယ်ခွဲ (ဒါမှမဟုတ်)ရှေ့ချထားတဲ့ ဆံပင်ပုံ ဘယ်လို မျိုးနဲ့ လိုက်လဲဆိုတာကို အောက်မှာဖော်ပြထားပါတယ်။ လေးထောင့်ကျတဲ့ မျက်နှာပုံစံ ဒီလို မျက်နှာပိုင်ရှင်တွေ ကတော့ … Read more
ရှားစောင်းလက်ပတ်ကို သုံးပြီး အသားဖြူ အောင်လုပ်နည်း
ရှားစောင်းလက်ပတ်ကို သုံးပြီး အသားဖြူ အောင်လုပ်နည်း အသားဖြူချင်တဲ့ ပျိုမေတွေအတွက် သဘာဝနည်းကို သုံးပြိီး ဘယ်လို ဖြူအောင် လုပ်လို့ရလဲဆိုတာကို ပြောပြပေးချင်ပါတယ်။ဓါတုပစ္စည််းတွေကို သုံးပြီး အ သားဖြူအောင် လုပ်မှာ ထက်စာရင်တော့ သဘာဝနည်းကို သုံးပြီး ကြိုးစားကြ ည့်တာက ပိုပြီးတော့ အန္တရာယ်ကင်းပါတယ်။အသုံးပြုရမယ့် ပစ္စည်း ကလည်း တခြားမဟုတ်ပါဘူး။ရှားစောင်းလက်ပတ်ပါ။ ရှားစောင်းလက် ပတ်ကို အသား ဖြူဖို့အတွက် ဘယ်လို မျိုး အသုံးပြုရမလဲဆိုတော့….. (၁)ရှားစောင်းလက်ပတ်တစ်မျိုးတည်းကို သုံးပြီး ဖြူအောင် လုပ်နည်း ရှားစောင်းလက်ပတ်ကို နှစ်ခြမ်းခွဲပါ။ပြီးရင် ဂျဲလ်ကို ထုတ်ပြီး ဇွန်း(သို့) ခရင်းနဲ့ ခြစ်ထုတ်ပါ။ပြီးရင်တော့ မျက်နှာမှာ လူးပေးပြီး(၁၀)မိနစ်ကြာအောင် ထားပေး ပါ။(၁၀)မိနစ်လောက် ပြည့်ရင်တော့ ရေအေးနဲ့ဆေးချပါ။ဒီနည်းကို တစ်ရက်မှာ နှစ်ကြိမ်လောက်၊အချိန်မရဘူးဆိုရင်လည်း အနည်းဆုံး တစ်ပတ်မှာ ငါးကြိမ်ေ … Read more